Yenza igalelo kwiAfricArXiv - AfricArXiv
Inkxaso yeAfricArXiv eyindawo yokugcina abantu kunye nabantu basemva kwendawo. Ukuze siqhubeke nokuzinzisa iinkonzo ze-KiaArXiv, ukugcina nokukhulisa uluntu kunye neqonga, sinika abantu kunye namaziko ngezi ndlela zilandelayo ukufaka igalelo emsebenzini wethu ngezemali.
Iindleko zethu zibandakanya:
ukwakha kunye nokugcina iqonga leAfrikaArXiv
Imirhumo yenkonzo (ukusingathwa kwewebhu kunye nolunye ubudlelwane benkonzo, umz. nge-ORCID, OSF, ...)
ukuhamba nokubonisa kwinkomfa - i-incl. iindleko ezinxulumene neVisa kunye nendawo yokuhlala
Yonke iminikelo yemali esiyifumanayo iya kuchithwa kwenye okanye ngaphezulu kwezi njongo zichazwe apha ngasentla. Ukuxoxa ukuba yeyiphi kanye imali oyinikezeleyo oya kufaka isandla ukunxibelelana nathi apha info@africarxiv.org.
Thumela imirhumo yemali nge M-Pesa ukuba + 254 (0) 716291963
ngokusebenzisa Liberapay ungawuxhasa umsebenzi wethu ngeminikelo ephindaphindiweyo. Iintlawulo ziza kungabikho ziintambo eziqhotyoshelweyo kwaye iminikelo itsaliwe nge- $ 100.00 ngeveki ngomxhasi ngamnye ukuze aphelise impembelelo engafanelekanga.
Funda ngaphezulu ku liberapay.com/about/